किड्नी कसरी फेल हुन्छ र कसरी बच्ने? किड्नी बचाउन केहि उपायहरू यस्ता छन्… जान्नुहोस – PathivaraOnline
Home > स्वास्थ्य > किड्नी कसरी फेल हुन्छ र कसरी बच्ने? किड्नी बचाउन केहि उपायहरू यस्ता छन्… जान्नुहोस
किड्नी कसरी फेल हुन्छ र कसरी बच्ने? किड्नी बचाउन केहि उपायहरू यस्ता छन्… जान्नुहोस
admin November 6, 2019 स्वास्थ्य	0
किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभीन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्यानै गुमाउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ किड्नी भनेको के हो ?, मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ, किड्नी कसरि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ र किड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? लगायतका कुराहरु जान्नको लागि पढ्नुहोस किड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु यस्ता छन्, पढिसकेपछि अवस्य सेयर गर्न नभुल्नुहोला ।
किड्नीको काम के हो ?
किड्नी र मुटु बिचको सम्वन्ध
किड्नी फेलहुनाका प्रमुख कारणहरु के के हुन ?
किड्नी भनेको के हो ? यो हाम्रो शरिरमा कहाँनिर हुन्छ ?
किड्नी खराव हुनु भनेको के हो ?
नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम र यसको लक्षणहरु के के हुन ?
किड्नी स्टोन (पत्थरी), यसको लक्षण र उपचार
तपाईको मुटु प्रतिमिनेट कति पटक धड्किन्छ ? बढि वा कम भए हुन्छ यस्तो खतरा!